Isitudiyo esinengadi imizuzu emi-5 ukusuka e-Walibi Park - I-Airbnb
Isitudiyo esinengadi imizuzu emi-5 ukusuka e-Walibi Park
127 okushiwo abanye
Roquefort, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Joëlle
U-Joëlle Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala ingemuva kwendlu enkulu. Izimele ngokuphelele, indawo yokungena izimele futhi idlula engadini. Ifulethi lixhumana nendlu enkulu ekhishini kodwa umnyango uhlala ukhiyiwe.
Ifulethi lingemuva kwendlu enkulu. Indawo yokungena izimele ngokuphelele.
Isitudiyo esingu-30m2 sakhiwe:
- Ikhishi elihlanganisa i-microwave / grill, ama-hotplates, isiqandisi, umshini wekhofi we-Tassimo (kufakwe ikhofi, itiye noshokoledi oshisayo),
- Igumbi lokuhlala elihlanganisa umbhede ophindwe kabili, umbhede osofa, ikhabethe lezingubo kanye ne-TV,
- Igumbi lokugezela eline-WC nobhavu. Amathawula, ijeli yokugeza kanye ne-shampoo kufakiwe,
- Ingaphandle elinokhuni elingu-300 m2 elinethala elimbozwe ngokwengxenye lapho ungajabulela khona i-grill eshintshwayo ibe i-plancha kagesi.
Ifulethi le-studio lifakwe:
- Ikhishi eline-microwave ne-grill oven, i-hotplate, ifriji nomshini wekhofi (kufakwe ikhofi, itiye noshokoledi oshisayo),
- Igumbi elikhulu elinemibhede yabantu ababili, umbhede usofa, ikhabethe lezingubo kanye ne-TV,
- Igumbi lokugezela elinendlu yangasese nobhavu. Kwafakwa amathawula nensipho,
- Ingadi egcwele isihlahla engu-300m2 enevulandi futhi ujabulele izoso ne-plancha grill.
4.91 out of 5 stars from 127 reviews
4.91 · 127 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-127
I-Roquefort itholakala phakathi kwedolobha namaphandle. Isitudiyo sitholakala ekugcineni komgwaqo othule ongasekho. Ku-1km uzothola isuphamakethe nezitolo ezincane.
Ku-3km, ungajabulela i-Walibi Park kanye ne-Aqualand Park.
I-Agen itholakala ku-7km kude nezitaladi zayo ezinhle ezindala: i-rue des Augustins, des Cornières, rue Beauville. Uzokwazi ukuvakashela Museum of Fine Arts, yesonto Notre-Dame du Bourg, lombhishobhi Saint Caprais, isonto Jacobins ... ekugcineni, ungakwazi ukuqeda uhambo lwakho lokuzungeza Garonne, kusukela lezinyawo abezinyawo ngaphezu komfula, uzoba nombono omuhle webhuloho elidala lomsele, lapho umsele oseceleni oya eGaronne uwela khona lapha, ebhulohweni lomsele wesibili elide kunawo wonke eFrance.
8km kude kunePasseligne Natural Park namachibi ayo amakhulu, iyindawo ekahle yokuhamba komndeni. Ukungena nokupaka kumahhala.
Ebangeni elingamakhilomitha angu-20, uzothola iNérac, idolobha lasebukhosini, elisegwini lomfula iBaïse. Enkabeni yeNérac endala, ungabuka izindlu zayo ezindala, izikhumulo zayo kanye nebhuloho layo lesiGothic elinqamula emanzini e-Baïse. Phakathi kwezindawo ongaziphuthelwa, singabala futhi i-rue Séderie kanye nengaphambili layo elihle elinamapulangwe angamahhafu, i-Sully house, i-Renaissance mansion, noma umnyuziyamu omuhle we-Henri IV castle-museum.
I-Roquefort iyidolobhana elincane elinabantu abangu-2000. Indlu isendaweni ethule eyi-1km ukusuka enkabeni yedolobha laseRoquefort. Isuphamakethe nezitolo ezincane zitholakala ku-1 km kude.
I-Walibi Park kanye ne-Aqualand Park ziqhele ngamakhilomitha amathathu.
I-Agen itholakala ku-7km kude nezitaladi zayo ezinhle ezindala: i-rue des Augustins, i-rue des Cornières, i-rue Beauville. Ungakwazi futhi ukuvakashela i-Fine Arts Museum, i-Notre-Dame du Bourg Chapel, i-Saint Caprais Cathedral, i-Jacobins Church… Ekugcineni, ungaqeda uhambo lwakho endaweni ezungezile ye-Garonne, ibhuloho labahamba ngezinyawo ngaphezu komfula, uzoba ne- umbono omuhle ebhulohweni lomsele omdala, lapho umsele oya eGaronne uwela khona lapha, ebhulohweni lomsele wesibili elide kunawo wonke eFrance.
8km kude kuneNatural Park Passeligne. Njengoba inamachibi ayo amakhulu, iyindawo ekahle yohambo lomndeni. Ukungena nokupaka kumahhala.
Ebangeni elingamakhilomitha angama-20 uzothola iNérac, idolobha elidala lasebukhosini, elisogwini lwe-Baïse. Enhliziyweni yeNérac yakudala, ungabuka izindlu zayo zasendulo, izindawo zayo zokungcebeleka kanye nebhuloho layo le-gothic. Ungakhohlwa ukuvakashela i-rue Séderie kanye nengaphambili layo elihle le-half-timbering, i-Sully house, indlu yangasese ye-Renaissance, kanye nenhle kakhulu ye-Henri IV castle-museum.
Bonjour, je m'appelle Joëlle ! Je loue un studio au calme avec jardin attenant à ma maison ! À bientôt !
Ungangabazi ukungishayela noma ungithumele umlayezo ukuze uxhumane nami
UJoëlle Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Roquefort namaphethelo